Soroka miara-milanja venezoelana hanome sakafo ho an’ny beantitr’i Caracas · Global Voices teny Malagasy
Soroka miara-milanja venezoelana hanome sakafo ho an'ny beantitr'i Caracas
'Abuelitos' miisa 400 no misitraka ny Programa
Nandika (en) i Laura
Voadika ny 01 Jolay 2020 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Français, русский, Ελληνικά, 日本語, Esperanto , عربي, Nederlands, Español
Mpikamban'ny Programa Mpiray monina tsara fanahy. Sary nahazoana alalana sy hita ao amin'ny Instagram.
Mandihy am-pifaliana sady mankasitraka i Julieta, vehivavy mihoatra ny 90 taona avy ao an-drenivohitr'i Venezuela, ao Caracas, isaka ny mitondra sakafo amin'ny harona i Vicente. Tamin'ity herinandro ity izy nanam-pifaliana tamin'ny nandraisana frômazy, vary, akoho efa voaomana sy henakisoa, lasopy sy mofo, ankoatra ireo karazan-tsakafo hafa. Misy ‘abuelitos’ — voambolana espaniola manondro ny ray aman-dreny sy anarana iraisana anondroana ireo zokiolona ao Venezuela — miisa 400 hafa mandray ampaha-tsakafo toa azy ihany koa isa-kerinandro noho ny Programan'ny Mpiray monina tsara fanahy (Plan Buen Vecino).
Abuelita (zokiolona vehivavy na nenibe) nisoratra anarana tao amin'ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy. Nahazoana alalana sady hita ao amin'ny Instagram.
Nampidirin'ny governemanta ny fepetram-pihatakatahana ara-piarahamonina tamin'ny 16 marsa hifehezana ny fielezan'ny coronavirus. Na izany aza dia nipongatra ireo fahasarotana hafa. Ahoana ny fomba ividian'ireo olona marefo indrindra sakafo, raha matahotra ny hivoaka ny trano ry zareo ary tsy misy ny olona azony irahana hanao izany, na raha tsy manana ny ilaina hampanao izany ry zareo?
Roa andro taorian'ny nampidirana ny fepetra tao Caracas, nisy vondron'olona nanangana ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy, tambajotram-bolantera (volunteers), mikendry ny hizara sakafo ho an'ny zokiolona toa nilaozana. Ao Venezuela, misy fikambanana sy fampitam-baovao mahazatra mampiasa ny voambolana ‘fandaozana’ na ‘orfandad,’ hamariparitana ireo zokiolona, izay voatery nifindramonina ny fianakaviana noho ny krizy sôsiô-pôlitika sy mahaolona, sady tsy mahazo fanohanana avy amin'ny Fanjakana. Araka ny FTMF Venezoelana Convite, efa ho iray tapitrisa ny zokiolona manirery rehefa nifindramonina ny fianakaviany.
Yuraima Mercado, mpikambana iray ao amin'ny fampitaovan'ny Programa nilaza tamin'ny Global Voices fa taorian'ny fikatonan'ireo fihariana sy restaurants, ary ao anatin'ny fepetram-panokana-monina, nisy ireo restaurants izay manana ambim-bava betsaka nefa tsy mety lafon-dry zareo intsony. Nanangana ny tetikasa i Verónica Gómez, mpanorina ny Programa ary mahafantatra ny sasantsasany amin'ny solontenan'ireo restaurants ireo, ka manao izay azony atao mba hizara ireny sakafo ireny amin'ny zokiolona.
Rehefa natombok'i Gómez ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy, dia nanatevin-daharana azy i Mercado sy i Valentina García. Nanampy tamin'ny famonosana, fanolorana fitaovana ary ny lakozia na nizara ireo ampaha-tsakafo, indrindra moa fa tamin'ny alalan'ny môtôny ireo namana sy olom-pantatra hafa.
Ao anatin'izy ireo ry Vicente Velutini, izay tompon'andraikitra tamin'ny fanangonana sy ny fizarana ireo fanomezana. Novolavolainy ihany koa ny lalana ho aleha mba hitsitsiana solika — kasinga iray azon-dry zareo amin'ny alalan'ny fanomezana sady zavatra iray anisan'ny tsy misy ao Venezoela amin'izao fotoana izao.
Noresahan'i Vicente tamin'ny Global Voices ny fiantraikan'ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy amin'ny firenena tahaka an'i Venezoela:
Tsy afa-mamarana ny fahantrana izahay, saingy afa-manao izay kely vitanay hanampiana ireo tena mila izany indrindra, izay betsaka ato amin'ny firenena. Amin'izao fotoana izao aloha izahay mifantoka amin'ny vondron'olona kely: ireo “abuelitos” tratran'ny fiangarana indrindra.
Amin'izao fotoana izao ny tetikasa, niainga tamin'ny fahalalahan-tanana sy ny fisantaran'andraikitr'i Verónica, dia ahitana mpamily fito, olona telo ao an-dakozia ary dimy amin'ny fampitaovana, amin'ny endrika volantera daholo izany rehetra izany. Ao anatin'ny “tambajotra” iray avokoa izy rehetra ireo, hoy ny napetrany.
‘Abuelito‘ (zokiolona na dadabe) misoratra anarana ao amin'ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy. Sary nahazoana alalana, sady hita ao amin'ny Instagram.
Tamin'ny voalohany ny sakafo naterina dia sakafo atoandro ihany ary niankina tamin'ny fanomezan-tsakafon'ny restaurants vitsivitsy. Fa amin'izao fotoana izao izahay efa manolotra fonosana ahitana vokatra 10 na mihoatra sy sakafo voakarakara miisa 5, noho ny fanomezana avy amin'ny fihariana isan-karazany sy ny fikambanam-piraisamonina sivily. MIlaza i Mercado fa amin'izao fotoana izao ny Programam-Piray Monina Tsara Fanahy mizara fonosana amin'ny ‘abuelitos’ miisa 100 isan'andro, ary 400 isa-kerinandro.
Naroroka tokoa ny Programa ka “mahazaka tena 100%” hoy i Mercado nanampy. Mandra-pahatonga ny tapaka ny volana mey ry zareo mikasa ho afaka mizara sakafo 1000 isa-kerinandro. Ho an'i Velutini, manantena “fitomboana araka ny tokony ho izy, fianarana haingana ary maharaka fiovana” izy ho fitaovana lehibe amin'ny fivelaran'ny Programa. Fitaovana lehibe iray hafa ny fampiasana ny media sosialy — fitaovana miasa tokoa ho solom-pampahafantarana ao Venezoela.
Heverin'i Velutini fa nahatonga “fitomboana an-dalana toa dian'andriana” ny fisian'ny Programam-Piray Monina Tsara Fanahy tao amin'ny Media Sosialy. Mahatsiahy izy ny tamin'ny voalohany nitodihan'ny mpikambana tao amin'ny programa tao amin'ny media sosialy hangataka fanomezana, raha ny mpisera media sosialy indray amin'izao fotoana izao no manatona azy ireo hanolotra vokatra ilaina. Azo notanterahana ny programa noho ny fandrindrana tamin'ny asa nanokanan'ny mpikambana ao aminy azy, tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny fiaraha-monina Venezoelana ary ny fampiasana ny teknolojia. “Fiaraha-mamokatra” iray manontolo araka ny amariparitan'i Mercado azy.
Niasa izahay ary te-hizara izany: tsiranoka famonoana bakteria miisa 40 no nomena ny beantitra monina samirery tamin'ny alalan'ny @planbuenvecino #leatherheart2020 #Covid_19 pic.twitter.com/jFy1XjVcYh – leatherheart (@leatherheartfun) April 16, 2020
Na dia fisantaran'andraikitra mahaolompirenena kibo saoky ny nahiny aza ny Programa, dia nanaraka tsara ireo fombafomba fanao ny mpikambana ao aminy hanatrarana ny tanjony. Nandray ireo torohay avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina momba ireo beantitra nilaozana ry zareo, izay tsy maintsy hamarinin-dry zareo raha ho ampidirina ao anaty foto-dahathiry. Rehefa hita ireny olona ireny dia resahan-dry zareo momba ny Programa ary soritana ny lalana hitaterana ny entana hozaraina. Fa raha vao manana fianakaviana afa-manampy na mividy sakafo ho azy ireo beantintra dia tsy voafidy ho ao anatin'ny Programa ireny.
Namolavola paikam-panorona hafa ihany koa ry zareo: manendry mponina ao amin'ireo buildings ahitana beantitra betsaka, izay tompon'andraikitra amin'ny fizarana ny “fonosana” mba hahabetsaka kokoa ny mpisitraka sy hanamaroan-karazana ny raharaha. Ny fanampin'izany, araka ny fanazavan'i Velutini, ny fitsinjarana dia atao manaraka ny arofenitra fanajana hentitra ny fahadiovana eo ambany fitarihan-dalan'ny spesialista fiarovana ny zavamananaina, izay milaza azy ireo hanaja ny elanelam-batana, misasa sy hamono amim-pitandremana ny sakafo ary hampiasa ihany koa ny fonontanana sy ny maska.
Tian'i Mercado sy Velutini ny Programa Mpiray Monina Tsara Fanahy hihoatra ny areti-mandringana COVID-19 sy hihitatra any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Fehiezin'i Velutini ao anatin'ny toe-tsaim-panantenana sy ny fikirizana izany:
Eo amin'ny fialana ny voina sy ny korontana, afa-mipoitra ny hery (mahavita fahagagana).
Ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana tsy mbola nisy toy izany mifanandrify amin'ny krizy mahaolombelona ratsy indrindra mianjady amin'ny firenena, tsy isalasahana fa fahagagana ho an'ny ‘abuelitos‘ venezoelana miisa 400 ny misitraka ny Programan'ny Mpiray Monina Tsara Fanahy.